Somaliland Oo Markii Ugu Horaysay ka Hadashay Xilka Qaadistii RW Kheyre. – Awdalmedia
Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxaa ay ka hadashay kalsooni kala noqoshadii xildhibaannada golaha Shacabka ay ku sameeyeen 25-kii Bishii july ee sanadkaan Xukuumadii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Gaaxnuug oo la hadlay Warbaahinta KFTV ayaa sheegay in hanaankii lagu riday xukuumaddii Kheyre ay aheyd mid ka muuqatay mas’uuliyad darro, hayeeshee soomaaliland aysan waxba ka quseyn.
Waxaa uu sheegay in Nidaam dhan oo jiray in waxka yar lagu rido rubi saac taasi ay tahay wax lala yaabo oo muujineyso in ay jiraan is aaminid la’aan ka dhex jirta Soomaalida iyo inaysan aamini karin Xubnaha Beesha Caalamka ee la Shaqeeya.
” In xukuumaddii wada-hadalka nala waday wax yar lagu rido waxay muujineysaa in aan lagu kalsoonaan karin waana mid ku dhisan Xukuumadda muqdisho taasina ay tahay nasiib darro ayuu yiri” Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Soomaaliland aysan jirin mowqif cad oo ku saabsan xilka qaadistii Ra’iisul Wasaaarihii Soomaaliya Xasan Cali kheyre,isla markaana aysan dooneyn inay farageliyaan Arrimaha ka jira Soomaaliya.
Soomaaliland oo aamisan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ayaa Xubno ka socday Soomaaliland iyo Madaxda sare ee dowladda oo uu kamid ahaa Ra’iisul Wasaarihii xilka laga tuuray ee Soomaaliya waxaa ay wada-hadallo ku yeesheen dalka Jabuuti, iyada oo la sameeyay Guddiyo wada-hadallada sii wada.